विदेशमा पढेर पुनर्जिीवन विद्यामा पारङ्गत भएका चार जना युवाहरू भर्खरै स्वदेश फर्केका थिए । जागीरको खोजमा एक दिन गाउँबाट राजधानीतिर जाँदै थिए । बाटोमा एउटा ठूलै जङ्गल पथ्र्यो । जंङ्गल छिचोलेपछि बल्ल शहर जाने राजमार्ग भेटिन्थ्यो ।
जङ्गगलको बीचोबीचतिर पुगेका थिए, त्यहाँ भर्खर भर्खरै एउटा ढिस्को भत्केर केही ढुङ्गा र हाडहरू बाहिर उत्रेका देखिए । विद्वान् युवाहरूले आपसमा मुखामुख गरे । चारमध्येका प्रथम श्रेणीमा प्रथमले अघि सर्दै साथीहरूसँग भन्यो, हामीले सिकेका पुनर्जीवन विद्याको जाँच यसैमा किन नगर्ने ? सवैका अनुहारमा उत्साह चमक्क चम्क्यो ।
“पढेलेखेकाजस्तो देखिनुहुन्छ, किन यस्तो मूर्ख मति लिनु भएको ?” दाउरेले आफ्नो स्वाभाविक जिज्ञासा राख्यो ।
प्रथम श्रेणीमा प्रथमले दाउरेका मनका कुरा बुझेजसरी जवाफ दिँदै भन्यो, “यी हाडहरू बाघका होइनन्, मान्छेका हुन् । त्यो पनि हजार वर्षअघिका मान्छेका हुन् । मान्छे समझदार प्राणी हो । बुझ्यौ ?”
हैन, हैन हामीले लुटेका होइनाैँ । हामी त भर्खरै पढाइ सकेर शहर जान लागेका विद्वान्हरू । तपाइँका जमानामा हामी जन्मेकै थिएनौँ । तपाइँलाई लुट्नेका सन्तानलाई हामी चिन्छौं । तपाइँले आफ्नो माग तिनीहरूसँग राख्ने हो । हामीसँग होइन । हामी त तपाइँको पक्षमा छाैँ विद्वान्मध्येको प्रथमले भन्यो ।
पुनर्जिीवित थप क्रोधावेशमा आयो । त्यसका आँखाबाट राता राता ज्वाला निस्केजस्तो स्थिति देखियो । पाखुरा सुर्कँदै त्यसले भन्यो, तिमीहरूले झुक्याएर अव म झुक्किन्न । मलाई यो हालतमा पुर्याउने अन्यायीहरू एक एकको अनुहार बिर्सेको छैन मैले । म बिर्सनै सक्दिनँ । दाँत उही, आँत उही, छाँटकाँट उही , म के आफ्ना दुश्मनहरू पनि नचिन्ने भुच्चुक हूँ ? म भुच्चुक होइन । म तिमीहरू एक एकलाई निमोठेर यहीँ थुपार्छु । यति भन्दै एक युवालाई च्याप्प समातेर भुइँमा थचा¥यो । अरु दुई जना थच्याक्थुचुक् आफै भुइँमा बसे ।